Madaxweyne Xasan oo magacaabay Xeer Ilaaliyaha guud ee qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta digereeto ku magacaabay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, kaasoo ay 24-kii bisnaa July ay ansixiyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya. Sidoo kale, wareegtada ayaa xilkii looga qaaday Xeer Ilaaliyihii hore: C/qaadir Maxamed Muuse.
Hadaba Xeerka ayaa u qornaa sidatan:
Xeer Madaxweyne Magcaabis Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya markii uu arkay qodobka 87-aad XC, qodobka 9-aad ee XK iyo 99-aad XG ee Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Markuu arkay soo jeedinta Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya RF XRW/DK/000170 Tr 24-07-2014, markuu tixgeliyey go’aankii golaha Wasiirrada FHGW.000.39.07. 14 24-07-2014, Kuna saabsan ansixinta magcaabista xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka iyo xilka qaadista xeer ilaaliyihii hore ee uu golahu cod buuxa ku ansixiyey, Madaxweynuhu wuxuu soo saaray xeerkan.
1- Waxaa laga bilaabbo maanta oo ay Tr tahay 26-07-214, xilka laga qaaday xeer illaaliyihii guud ee hore, Cabdiqaadir Maxamed Muuse, waxa uuna Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Ansixiyey magcaabista in uu Mudane Axmed Cali Daahir noqdo Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka.
2- Waxa xeerka si deg deg ah markuu Madaxweynaha Saxiixo, waxaa lagu soo daabici doona faafinta rasmiga dowladda Soomaaliya.
Waa Kuma Ninka Cusub?
Ninka loo magacaabay Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka, Axmed Cali Daahir waxaa adeed u ah Xeer Ilaaliyihii ka horreeyey C/qaadir Maxamed Muuse ee la yiraahdo C/laahi Daahir Barre. sidoo kale Axmed wuxuu isku waqti wax barteen ninka uu maanta badelayo ee C/qaadir Maxamed Muuse.
Xeer Ilaaliyihii hore ee xilka laga qaaday oo maanta Muqdisho kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa ku gacan seyray xil ka qaadista lagu sameeyey, wuxuuna ku tilmaamay mid aan sharci aheydn.
C/qaadir Maxamed oo maanta xilkiisa waayey ayaa wuxuu horay si cad uga horyimid Xeerka Golaha Adeega Garsoorka Soomaaliya, kasoo baarlamaanku ansixyey kadib markii ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka.